Mientanentana Momba Ireo Atletany Ny Jamaikana ary Somary Mitebiteby Kely Momba ny ao Rio · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Aogositra 2016 5:30 GMT
Sary famantarana ny lalao Olaimpika Rio 2016. Sary navoakan'i Marcos Castellano, CC BY-NC-ND 2.0 license.
Fara-tampony ny fihendratrendratana ao Jamaika ny alina mialoha ny Lalao Olaimpika ao Rio. Antenaina hitombo ny hafanam-pon'ny fitiavan-tanindrazana, amin'ny fanohanana indrindra ireo atleta Jamaikana.
Na izany aza, manimba zavatra ny tsy fahampian'ny fandaminana sy ny olana ara-piarovana. Raha ifantohan'ny tatitry ny mpanao gazety ara-panatanjahantena ny toe-batana sy ny mety ho zava-bitan'ny atleta Jamaikana, dia misy ahiahy mandeha ihany any ambadika any.
Nitatitra momba ny efitra fampiantranoana mbola tsy vita ao amin'ny Tanànan'ny Mpanao fanantanjahantena ny gazety Gleaner, tamin'ny fandefasana lahatsary misy ireo gorodona sy efitra fidiovana mbola tsy vita ary koa ny tsy fahampian'ny fanaka ao amin'ny efitranon'izy ireo.
JEREO: Tonga tao amin'ny efitra mbola tsy vita ao anatin'ny tanànan”ny atleta roa andro alohan'ny lalao Olaimpika ireo Jamaikana
Na izany aza, manana fanantenana amin'ny ho fihatsaran'ny zavamisy ireo tompon'andraikitry ny ekipa. Mifanohitra amin'izany, nilaza momba ireo fampiantranoana mirentirenty amin'ny sambo fitsangantsanganana ho an'ny ekipa basket-ball Etazonia kosa ny media ao an-toerana. Noho ny fifantohan'ny fampahalalam-baovao amin'ilay atleta kalaza Jamaikana Usain Bolt, mba nahazo fikarakarana manokana kosa izy.
Mpisipirinty Jamaikana Usain Bolt. Sary avy amin'i Nick Webb, lisansa CC BY 2.0
Naka sary maromaro manerana ny tanàna i Bolt, nanaiky am-pifaliana haka sary «famantarana azy » (avy amin'ny dihy Jamaikana) miaraka amin'ireo olo-tsotra sy mpanohana. Hoy izy nisioka:
Nilaza izy ireo fa avy amin'ny fiarahamonina (Favelas) mampidi-doza indrindra ao Rio ireto ankizy ireto saingy ireo no hoavintsika
Nitatitra ny fatokisan-tenan'i Bolt ilay mpanao gazety Jamaikana Kayon Raynor, manoratra ao amin'ny sampam-baovao Reuters fa afaka mandresy ilay mpifanandrina goavana aminy, Justin Gatlin izy:
Nampanantena “hampiseho ny fahatezerany” amin'ilay sipirintera Amerikana Justin Gatlin i Usain Bolt, mikasa izy handrombaka medaily volamena “tsitelotelo” tsy mbola nisy toy izany amin'ny Lalao Olaimpika ao Rio de Janeiro.
Nanome fitsaboana manokana ho an'i Bolt ny manampahefana Jamaikana mba ahafahany mifaninana amin'ny Lalao ao Rio, noho ny fahararian'ny hozatra nandritra ny fanazarana olaimpika. Tsy nahay nanararaotra tamin'izany i Gatlin tsy naharesy an'ilay mpifanandrina aminy 29 taona.
Nilaza i Gatlin fa nahazo “alalana tamin'ny mpitsabo” mba hifaninana ity tompon-daka nahazo medaily volamena in'enina ity. Nilaza i Bolt tamin'ny Alarobia (heriny) fa vao maika mamelona ny faniriany hampangina ilay Amerikana amin'ny fandresena azy eo ambonin'ny sehatra izany.
“Eny tokoa, mino aho fa tsy nahafantatra nandritra ny taona maro izy ireo fa arakaraky ny hitenenanao, no mampitombo ny faniriana handresena”, hoy i Bolt tamin'ny Reuters tamin'ny Alarobia (heriny).
Mandritra izany, nanamarika ireo Jamaikana tonga tao Rio fa nohamafisina ny fiarovana, ary nitatitra izy ireo fa nandre poa-basy teo akaikin'ny toby fanazaran-tenan'ny ekipa Jamaikana:
Niaina alina mahasosotra tamin'ny Asabotsy ireo mpikambana ao amin'ny delegasiona Jamaikana amin'ny Lalao Olaimpika ao Rio de Janeiro, satria nisy ny poa-basy re nandritra ny ora maro tao amin'ny favela (faritry ny mahantra ao an-tanandehibe), izay mifanakaiky amin'ny toby fanazaran-tenan'izy ireo ao amin'ny Hotely Linxl.
Na dia miahiahy, nilaza ny mpitantana ny ekipa, Ludlow Watts fa matoky tanteraka ny fiarovana ny ekipa izy, nanamarika izy fa fampahatsiahivana ny fahamalinana ilaina izany zava-niainana izany.
Nanome toky ihany koa izy fa noraisina ny dingana rehetra mba hiantohana ny fiarovana ny delegasionia manontolo.
Mpanao gazety ara-panatanjahantena iray hafa nandinika momba ny ambiansy somary be tebiteby alohan'ny Lalao:
Misy ny fihenjanana tsapa.
Ny tiako ambara dia tsy isan'andro ianao no mahita mpiambina amin'ny hotely manao akanjo fiarovana amin'ny bala. Tsy hoe na aiza na izao eto an-tany ianao no lazaina mba tsy handeha irery eny an-dalana, na mandray taxi (toro-hevitra tsara ny Uber), na zavatra tahaka izany.
Ny tiako ambara, dia tsy hoe tahaka ny tsy manana olana isika any amintsika ao Jamaika. Saingy toa somary sarotsarotra ny zavatra eto.
Ilay nahazo medaly volamena Shelly-Ann Fraser-Pryce no hitarika ny ekipa Jamaikana ao amin'ny kianja Olaimpika amin'ny andro fanokafana. Nampiseho azy tonga tao amin'ny toby fanazaran-tena miaraka amin'ny volony somary rakotra ny sary nalefan'i Ricardo Makyn tao amin'ny Twitter; malaza kokoa amin'ny endriky ny volony miloko sy tsy mahazatra ity tompon-daka ity:
.@realshellyannfp tonga ao amin'ny hotely Linx, Brezila, vonona hiatrika ny #Rio2016.
Raha tsy dia mahaliana ny vaovao ao an-toerana, leo tatitra ratsy momba ny ao Rio ny Jamaikana sasany :
Tahaka ny mahazatra, manana fanantenana lehibe ny Jamaikana fa hahazo medaily marobe amin'ny lalao. Koa, avelao hanomboka ny Lalao!
4 herinandro izayDominika